Mogadishu Journal » Ra’iisal wasaare Saacid iyo maadaxweyne Faroole oo kulan ku yeeshay magaalada dalka Jabuuti
Mjournal : — Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya iyo Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo booqasho ku jooga dalka Jabuuti, ayaa kulan halkaa kula qaatay madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland C/raxmaan Sheekh Max’ed Faroole oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya ayaa mid ka mid ah hoteelada dalka Jabuuti waxaa uu casho sharaf ugu sameeyay wafdiga ka socday maamul gobolleedka Puntland ee ku sugan dalka Jabuuti, iyaga oo halkaa isku weydaarsaday aragtiyo la xiriira siyaasada Soomaaliya.
Laakiin waxaa la sheegay in labada dhinac aysan si toos ah uga wada hadllin arrimaha siyaasada waqtigan taagan, iyaga oo kaliya u sheekeystay si guud iyo waliba is xog wareysi la xiriira xaalada dalka.
Madaxweyne Faroole ayaa uga mahad celiyay ra’iisal wasaaraha iyo marwadiisa casho sharafta ay u sameeyeen wafdiga maamul gobolleedka Puntland ee ku sugan dalka Jabuuti.
Madaxweyne Faroole waxaa ku waheliyay kulankaan cashada ah ee xalay ka dhacday dalka Jabuuti xubno ka tirsan wasiiradda Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka caafimaada,arrimaha guddaha,dakeddaha iyo xubno kale.
Waxaa la sheegaya inay surtagal tahay inta labada wafdi inta ay ku sugan yihiin dalka Jabuuti in ay kawada-hadllaan khilaafka siyaasaded ee ka dhex jira dowladda faderaalka Soomaaliya iyo Puntland oo muddadii danbe sii xooggeysanayey,balse ma jirto cid arrinta illaa hadda xaqiijisey.
Dowladda Itoobiya ayaa xiligan ku howlan sidii meel dhexe leysugu keeni lahaa dowladda federaalka Soomaaliya maamul gobolleedka Puntland oo ku kala aragti duwan dhinaca siyaasada.